Eswatini oo lagu qabtay inta u dhexeysa Taiwan iyo Shiinaha waxay la macno tahay khatar weyn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Eswatini oo lagu qabtay inta u dhexeysa Taiwan iyo Shiinaha waxay la macno tahay khatar weyn
Guddiga Dalxiiska Afrika • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • News • Wararka Jebinta ee Taiwan • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Marka boqortooyo nabadeed oo Afrika ku taal ay kacsan tahay waxaa loo badinayaa inay jirto sabab ballaadhan. Boqortooyada Eswatini waxaa laga yaabaa inuu yahay khilaafka Shiinaha ee Shiinaha. Shiinuhu wuxuu doonayaa dowlad cusub oo ka dhista Eswatini - iminkana waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii uu bahalkan shuuciga ah sixirka u sameyn lahaa.
Xaalada dagan ee hada kajirta magaalada caasimada ah ee Mbabane oo ay kuyaalaan dukaamo xiran iyo wadooyin faaruq ah ayaa laga yaabaa inay tahay aamusnaanta kahor duufaanta saxda ah.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo xoogag dibadeed oo saanad u keenay caasimada Eswatini.
Ka sokoow dhalinyaro mudaaharaadaya oo doonaya inay saameyn badan ku yeeshaan wadanka, waxaa jiri kara awood weyn oo ka shaqeysa xaalada asalka. Awooddani waxay noqon kartaa Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha.
Walter Mzembi, oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibedda ee Zimbabwe, aqoon durugsana u leh siyaasadda juquraafiga ee Afrika, wuxuu qabaa, Shiinaha in ay leedahay sababo badan oo ay ku aragto boqorka Eswatini oo meesha ka baxay.
Maaha wax kadis ah in Mareykanku ka dhiso mid ka mid ah safaaradaha ugu waaweyn adduunka dalkan yar ee Eswatini. Sababta waxaa hubaal ka mid ah Taiwan iyo Shiinaha.
Su'aasha ugu weyni waxay noqon kartaa Shiinaha iyo rabitaanka quwaddan adduunku inay yareeyaan saamaynta gobolkooda baxsadka ah ee Taiwan, oo sidoo kale loo yaqaan Jamhuuriyadda Shiinaha.
Dawlad cusub oo ka dhista Eswatini waxay hubaal ka beddelan doontaa aqoonsiga Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ee Jamhuuriyadda Shiinaha, oo loo yaqaan Taiwan. Shiinuhu wuu jeclaan lahaa tan - waxayna muhiim u tahay awooddan hantiwadaagga ah. Eswatini waa Waddanka kaliya ee Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la leh Taiwan.
Sidaa darteed ma noqon karto wax kadis ah in Xisbiga Shuuciga ah ee Eswatini uu maanta xaqiijiyay in Maamuuskiisa, King Mswati III uu ka cararay dalkiisa oo uu sheegay in lagu soo waramayo in uu joogo Johannesburg, South Africa. Jilaaga Raiisel wasaaraha Boqortooyada ayaa beenisay tan.
Boqorka ayaa la sheegay inuu ka baxay iyadoo ay socdeen mudaaharaadyo dimuqraadi ah oo ku faafay boqortooyada 1.16 milyan oo qof maalmihii la soo dhaafay.
Eswatini xubin ka yahay Qaramada Midoobay, Barwaaqo Sooranka, Midowga Afrika, Suuqa Guud ee Bariga iyo Koonfurta Afrika, iyo saldhigga Botswana Bulshada Horumarinta Koonfurta Afrika.
Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha waxaa lagu yaqaanaa inay saameyn weyn ku leedahay SADC. Qaarkood waxay yiraahdaan Bulshada Horumarinta Koonfurta Afrika waxay lumisay muhiimaddeeda, iyadoo ka careysiisay Shiinaha.
Dowlada Shiinaha, faa iidooyinka ay leedahay la shaqeynta Afrika way iska cadahay. Shiinuhu wuxuu u isticmaalay maalgashikiisa Afrika inuu galaangal u yeesho kheyraadka badeecadaha badan ee qaaradda, oo ay ku jiraan saliida, macdanta qaaliga ah, iyo macdanaha muhiimka u ah soo saarista tikniyoolajiyadda soo ifbaxaya sida baytariyada baabuurta korontada ku shaqeeya.
Afrika sidoo kale waxay u tahay suuq soo jiidasho leh shirkadaha dhismaha ee Shiinaha, kuwaas oo wajahaya awood xad-dhaaf ah oo guryahooda ah isla markaana doonaya inay helaan goobo cusub.
Si kastaba ha noqotee, marar badan faa'iidooyinka mashaariicdani kuma qulqulaan xoogagga Afrika ee ballaaran. Maalgelinta Shiinaha ee mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika ayaa sidoo kale inta badan la yimaada shuruudo ah in dalalka amaahda ay doortaan alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, taas oo adkeyneysa dalalka kale, oo ay ku jiraan Mareykanka, inay ka qaybgalaan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika.
Beijing waxay sidoo kale awood u yeelatay inay ka faa'iideysato ka qeyb qaadashadeeda Afrika dhanka taageerada
heer caalami. Tusaale ahaan, Shiinuhu wuxuu u isticmaalay joogitaankiisa Afrika inuu go'doomiyo Taiwan dublamaasiyad ahaan. Dhammaan ummadaha Afrika, marka laga reebo Eswatini, waxay Beijing ka aqoonsadeen Taipei. Hogaamiyaasha Afrika waxay sidoo kale muujiyeen inay taageersan yihiin sheegashada dhuleed ee Beijing ee Koonfurta Shiinaha waxayna soo bandhigeen hadalo fagaara ah oo lagu taageerayo Beijing intii lagu guda jiray mudaharaadyadii 2019 ee Hong Kong.
Cawaaqibka Afrika ka dhalan kara ayaa isugu jira. Halka Afrika ay baahi weyn u qabto
kaabayaasha dhaqaalaha ee aan wali la daboolin, mashaariicda ay maalgeliso Shiinaha inta badan waxaa lagu soo xulaa qaabab madmadow ah, taasoo ka sii daraysa dhibaatooyinka musuqmaasuqa. Intaa waxaa dheer, maalgelinta Shiinaha waxay ku timaadaa qiimo, taasoo gacan ka geysaneysa deyn badan oo aan la sii wadi karin oo ka jirta dalal badan oo Afrikaan ah.
Dhaqamadaan amaahda ah waxay keeneen eedeymo ku saabsan gumeysi cusub, ka dib dib u dhaca dhaqaale ee uu keenay COVID-19 dillaaca, dalalka Afrika waxay si isa soo taraysa ugu baaqeen in laga cafiyo deynta.
Shiinaha illaa iyo hadda kama uusan aamusin codsiyadaas, waxayna sare u qaadeysaa su'aasha ah in
Mareykanka iyo deeq bixiyaasha kale ee caalamiga ah ayaa looga tagi doonaa sharciga.
In kasta oo Shiinuhu uu baahiyay dadaalkiisa caafimaadka bulshada ee bani'aadamnimada ee Afrika intii lagu jiray
Cudurka faafa ee COVID-19, dad badan oo Afrikaan ah ayaa shaki qaba waxayna muujiyeen walaac ah in qalabka ay ku deeqday Shiinaha ay noqon karto mid tayo ahaan liita.
Boqortooyada Eswatini waa mid ka mid ah 15ka dal ee aqoonsaday Jamhuuriyadda Shiinaha, sidoo kale loo yaqaan Taiwan Waa waddanka kaliya ee Afrika ee aan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha.